Kedu ihe e5 pụtara na ọkụ eletrik? – Wikipedikia Encyclopedia?
An E5 Koodu mperi na-egosi na enwere nsogbu na onye na-akwado gị ma ọ bụ ịpụpụ. Ọ bụrụ na onye ofufe gị na-abịa, mana na-enye gị ihe E5, O yikarịrị ka ị nwere ihe mgbochi na ikuku ikuku gị. Nke a na-emetụtakarị 45HI ka ụdị 45H na-esi n'ihu ikpo ọkụ pụta ozugbo.
N'otu aka ahụ, kedu ka esi edozi ebe ọkụ eletrik na-eme mkpọtụ?
1kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Lelee Hardware Connections. Ọtụtụ mgbe, ọkụ eletrik na-eme mkpọtụ n'ihi na ọ nwere ngwaike rụrụ arụ.
2kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Lelee akpa. Igwe na-ehulata nwere ike ịmepụta mkpọtụ na-enweghị isi.
3kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Lelee ikuku mmiri.
4kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Iho mmanu mkpara ahụ.
5kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Dochie Motor.
6kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Lelee itgba Gbanye.
Ọzọkwa, kedu ka esi ehicha ọkụ ọkụ eletrik?
Já nwere ike ịkọbara n’ime gị ọkụ ọkụ eletrik, dị ka ngalaba ọ bụla dị n'ụlọ gị. Iji wepu ájá ọ bụla, jiri naanị a ọcha, akwa ákwà iji kpochapụ ihe dị n'ime. Jiri nwayọ kpochapụ mgbasa ozi ọ bụla dịka ndekọ ma ọ bụ iko n'ime gị ọkụ ọkụ eletrik dị ka nke ọma.
Kedu ihe igwe ọkụ eletrik m anaghị arụ ọrụ?
Kedu otu esi edozi ebe ọkụ eletrik Dimplex?
Kedu ihe kpatara igwe ọkụ eletrik m anaghị agbanye?
Ogologo oge ole ka ọkụ ọkụ eletrik na-adịru?
Kedu ka ị ga-esi gbanye ọkụ eletrik?
Kedu otu esi ehicha ebe ọkụ eletrik?
Kedu ihe mere eji etinye ọkụ eletrik m?
Igwe ọkụ eletrik ọ nwere ike ibute ọkụ?
Gịnị bụ SpectraFire?
Kedu ka esi amalite ebe a na-ekpo ọkụ Oku N Glo?
Kedu ka ọkụ ọkụ ọkụ adịgboroja si arụ ọrụ?
Kedu otu esi agbanwe ọkụ ọkụ n'ebe ọkụ eletrik?
Kedu ihe kpatara igwe ọkụ eletrik m ji agbachi?
Igwe ọkụ eletrik ọ na-ada ụda?
Kedu ka ọkụ ọkụ eletrik adịgboroja si arụ ọrụ?
Kedu ka m ga-esi chọta nọmba ụdị dimplex m?
Ego ole ka ọ na-eri iji gbaa ọkụ eletrik kwa ọnwa?
Kedu ka esi ehicha ọkụ ọkụ eletrik Dimplex?
Kedụ ka m ga-esi wee mee Dimplex m?
Igwe Igwe eletrik Agaghị agbanye
Ugbu a, lelee maka wiwi na-ezighi ezi. Fọdụ ọkụ ọkụ eletrik nwee igbe igbe arụnyere (zoo aka na ntuziaka onye nwe ya). Dochie fuuz ọ bụla gbara ọkụ ma ọ bụrụ na ọdabara. Mgbe ole na ime adịghị ọrụ (na na batrị adịghị anwụ n'ezie), nsogbu ahụ na-edina na bọọdụ sekit.
Kedu ka m ga - esi edozi ebe ọkụ ọkụ Dimplex?
Kwenye na etinyere ebe a na-etinye ọkụ na sekit kwesịrị ekwesị.
Dochie remote ma ọ bụrụ na unit na-abịa na onwe ha na-enweghị gị agbanye ya.
Lelee ike ọkọnọ ma ọ bụrụ na ngalaba agaghị abịa mgbe ịpịrị eriri.
Nyochaa ọdịdị nke ire ọkụ ahụ.
Ọkụ Ada ada Gbanwuo
A na-agbanye ọkụ ọkụ eletrik site na gbanye / gbanyụọ mgba ọkụ emi odude ke ibibene m ordịghe ọkụ ọkụ unit na a ime akara. N'ọnọdụ ụfọdụ, electric voltaji si ike tinyekwa na ekwú ọkụ bụ tinye n'ime adịghị weta ọkụ eletrik zuru ezu ike ngwaọrụ.
Turn mkpịsị aka site na " Gbanyụọ" gaa na ọnọdụ "Pilot". Tinye aka na pilot, nke na-eji aka na-eziga gas n'ime usoro. Pịa bọtịnụ mgba ọkụ otu ugboro kwa sekọnd ruo mgbe ọkụ. Dabere na ogologo oge ọ dị kemgbe gas ọkụ ọkụ e jiri ya mee ihe ikpeazụ, ọkụ nwere ike iwe ọtụtụ mbọ.
The ọkụ ọkụ eletrik na-agbakwụnye ọkụ site n'ịmepụta ọkụ simulated maka ịchọ mma naanị. Dị ka ikpo ọkụ ohere, gị ọkụ ọkụ eletrik nwere ike ịmepụta a ịpị mkpọtụ mgbe agbanyere na mbụ. Ụda a na-abụkarị ihe na-esi na ikuku kpo oku na-agbasa.
Mgbe eji ya tụnyere gas na nkụ ọkụ ekwú ọkụ, ọkụ ọkụ eletrik bụkarị nhọrọ kachasị nchebe ma wepụ ọtụtụ nsogbu nchekwa. Enweghị ike do so nwere ike na-ebute nsị carbon monoxide na ụlọ ọkụ, ma akwa nchebe mbibi na nwere ike na-ebute ọrịa, mmerụ ahụ na ọbụna ọnwụ.
SpectraFire - The SpectraFire oku ire ọkụ na-enye ezigbo ọdịdị ire ọkụ. Combinationsdị agba ndị a gụnyere: Ọdịnala, SpectraFire (Omenala w / acha anụnụ anụnụ), Indigo, Violet na Blue. Ọkụ ire ọkụ na-enwu gbaa na usoro usoro nnọchi anya nke ukwuu.
Ntụziaka Lighting Pilot maka Okpomọkụ-N-Glo Gas Fireplaces
Chọta valvụ na-enye gas (nke a na-ahụkarị n'azụ, n'okpuru oghere iko - nwere ike ịbụ ọbara ọbara ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ).
Mepee valvụ site na ịmegharị ihe dị ka eriri gas.
Chọta nzukọ ndị na-anya ikuku nke nwere ọkụ na-enwu ọkụ (nke dị n'azụ na n'okpuru ndekọ na igbe ọkụ - nke na-adịkarị na ala ala)
Mgbe ahụ chọta bọtịnụ na-acha uhie uhie ma ọ bụ oji.
Igwe ọkụ eletrik jiri ihe igwe eji eme ka ikpo oku. Fọdụ ọkụ ọkụ eletrik na -ejikwa teknụzụ infrared iji kpoo ụlọ ọkụ ozugbo. Banyere ndị ahụ ga-adị mma ọkụ, onye na -atụgharị ihe na -egosipụta ọkụ sitere na bọlbụ LED iji mepụta ezigbo mkpagharị na ọkụ.
Push button A ka gbanye ekwú ọkụ on, ike ngosi n'ihu ihuenyo ga- n'aka odo, ire ọkụ mmetụta ga-abịa na mgbe ndị ọkụ ọkụ eletrik dị na. Push button A ọzọ, akara ngosi ike ga-apụ n'anya, enweghị mmetụta ire ọkụ. Nke a ọkụ ọkụ eletrik a kwadebere ya na thermostat.
Ajọ omume nke an ọkụ ọkụ eletrik
Ihe mbu kpatara na otutu ọkụ ọkụ eletrik bụ enweghị ikuku zuru oke site na nkeji. Ọ bụrụ na ikuku na-erubata na igwe anaghị ezu oke, ọ ga-emechi anya na mbọ iji gbochie ikike ọkụ.
Soot, anwụrụ ọkụ, na ndị -ada of mgbawa osisi-kasị ezi uche ọkụ ọkụ eletrik bia na njiri mara nke a iji nye gi ahuhumihe nke di nso dika o kwere mee n'ezie. Na-atụ anya ịhụ ire ọkụ na-egbuke egbuke, nzụlite brik nwere soot, na-n'ezie-ọkụ na-enwu n'ezie.
Igwe ọkụ eletrik na-arụ ọrụ site na ịbịaru ikuku dị jụụ, kpoo ya n'ime ya site na iji igwe kpo oku wee jiri nwayọọ na-amanye ikuku dị ọkụ n'ime ụlọ ahụ site n'ụzọ nke onye ofufe. N'ihi ya, ọkụ ọkụ eletrik nwere ike inye ọkụ na-enweghị okpomọkụ ka ọ nwee ike ịnụ ụtọ ya n'ime afọ.
The nọmba nlereanya ngwaahịa Enwere ike ịchọta ya n'elu ụlọ ahụ, n'akụkụ aka nri, n'azụ njikwa njikwa.
gas ekwú ọkụ iji n'etiti 7,000 na 16,000 BTU, dị n'etiti 70 na 90% nke ọma n'ịtụgharị ike ka ọkụ, na -eri gburugburu $ 60 otu afọ na- na-agba ọsọ. Igwe ọkụ eletrik jiri n'etiti 5,200 na 8,900 BTU were gbanwee ike ha niile na okpomoku. Ha -eri gburugburu $ 25 otu afọ na- na-agba ọsọ.
Gbanyụọ ma kwụpụ ekwú ọkụ.
Wepu log a setịpụrụ site na ekwú ọkụ ma debe ya.
Ghichaa akwa dị nro na mmiri ọkụ ma kpochapụ ya.
Kpoo ime ebe a na-asacha ya na akwa dị ọcha, dị nro.
Were iko nhicha fesa ihe n’ime iko ahụ.
Debe log ahụ n'ime ọkụ ahụ ma tinye ya.
Pịa ma jide akwụkwọ ntuziaka ngbanwe nhọrọ (FIGURE 10 –E) maka sekọnd ise (ọnọdụ “M”) ruo mgbe na agba ọkụ nke abụọ na-acha ọkụ. 5. Pịa ON button dị na ihe ntanetị njikwa akara (Nọmba 11). Nke a gakọrịta ihe ntanetị akara transmitter na-erite.
ebe obibi na ubi, ngwa ulo